KEDU IHE DỊ ICHE N'ETITI NETBOOK NA LAPTỌỌPỤ? - WINDOWS - 2019
Kedu ihe dị iche n'etiti netbook na laptọọpụ?
Na-achọ kaadị kọmputa dị na kọmputa, ọ bụghị ndị ọrụ niile maara na na nke a, na mgbakwunye na laptọọpụ onwe ha, e nwekwara akwụkwọ netbooks na ultrabooks. Ngwaọrụ ndị a dị n'ọtụtụ ụzọ yiri, ma enwere ọdịiche dị n'etiti ha na ọ dị mkpa ịmara iji mee nhọrọ ziri ezi. Taa, anyị ga-ekwu maka otu netbooks si dị iche na laptọọpụ, ebe ọ bụ na ihe yiri ya na ultrabooks dị ugbu a na weebụsaịtị anyị.
Gụkwuo: Ihe ịhọrọ - laptọọpụ ma ọ bụ ultrabook
Akwụkwọ netwọk dị iche na laptọọpụ
Dị ka aha ahụ pụtara, a na-ebute akwụkwọ ọgụgụ dịka ngwaọrụ maka ịfụfụ Intanet, ma ha ga-adabara ọ bụghị naanị maka nke a. N'iji ya tụnyere laptọọpụ, ha nwere ma ọtụtụ uru na ọghọm. Tụlee ha banyere ihe atụ nke ọdịiche dị iche iche.
O siri ike ịghara ịṅa ntị na ọdịiche dị mkpa n'etiti laptọọpụ na netbook - nke mbụ bụ mgbe a na-ahụ anya, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala ntakịrị karịa, karịa karịa nke abụọ. Nanị site na akụkụ ma soro isi atụmatụ.
Ọtụtụ mgbe, laptọọpụ nwere ihuenyo ihuenyo nke 15 "ma ọ bụ 15.6" (sentimita asatọ), ma ọ nwere ike ịbụ obere (dịka ọmụmaatụ, 12 ", 13", 14 ") ma ọ bụ ibu (17", 17.5 ", na Na obere oge, na ihe niile 20 ") Netbooks nwekwara obere ngosipụta - oke ha kacha dị 12", na nke kacha nta - 7 ". Ndị kasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ bụ "ọlaedo pụtara" - ngwaọrụ si 9 "ruo 11" na diagonal.
N'ezie, ọ bụ nhọta a bụ ihe kachasị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ngwaọrụ kwesịrị ekwesị. Na netbook netwọk, ọ dị mfe iji sọọfụ Ịntanetị, na-ele vidio vidio, nkata na ndị ozi ọsọ ọsọ na netwọk mmekọrịta. Mana ịrụ ọrụ na akwụkwọ ederede, ụyọkọ, igwu egwuregwu ma ọ bụ ikiri ihe nkiri dị na redio dị ala dị ka ọ gaghị adị mma, laptọọpụ maka ebumnuche ndị a ga-adabawanye.
Ebe ọ bụ na ngosipụta nke netbook dị ntakịrị karịa nke laptọọpụ, na akụkụ ya, ọ dịkwa ntakịrị obere. Onye mbụ, dịka mbadamba nkume, ga-adaba n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akpa ọ bụla, akpa n'akpa azu, ma ọ bụ ọbụna jaket. Nke abụọ bụ naanị n'ụdị dị iche iche nke ngwa ahụ.
Laptọọpụ nke oge a, ma e wezụga ngwa ngwa ịgba chaa chaa, adịlarị kọmpat, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, iburu ha na gị abụghị nnukwu ihe. Ọ bụrụ na ị chọrọ mgbe niile maọbụ chọọ ịntanetị, n'agbanyeghị ọnọdụ, maọbụ na aga, netbook ga-adaba nke ọma. Ma ọ bụ, dị ka nhọrọ, ịnwere ike ileba anya na ntụziaka nke ultrabooks.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na nchịkọta nke netbooks nwere mmetụta dị mma na ịdị arọ ha - ha dị ntakịrị karịa nke laptọọpụ ahụ. Ọ bụrụ na ndị ikpeazụ ahụ dị nso na 1-2 n'arọ (na nkezi, ebe ọ bụ na ụdị egwuregwu dị ọtụtụ), mgbe ahụ, nke mbụ adịghị ọbụna iru otu kilogram. Ya mere, nkwubi okwu a bụ otu ihe ahụ dị na paragraf mbụ - ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ị na-eburu gị kọmputa ma jiri ya maka nzube ya na ebe dị iche iche, ọ bụ netbook nke ga-abụ ngwọta a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Ọ bụrụ na arụmọrụ dị mkpa karị, ị doro anya na ị ga-ewe laptọọpụ, mana ihe ndị ọzọ na nke ahụ gasịrị.
Na ihe a, netbooks na-efu ọtụtụ laptọọpụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ikwu okwu banyere ndị nnọchiteanya kachasị ego nke otu nke abụọ na nke kachasị arụ ọrụ. N'ụzọ doro anya, ọkpụkpụ dị ịrịba ama dị ịrịba ama dị ịrịba ama - ọ gaghị ekwe omume ịkwado ígwè na-arụpụta ihe na ịmịnye ya dị jụụ maka ihe ọhụụ. Ma, na-enweghị nkowa zuru ezu karị ezughi oke.
A na-eji ntanetịime Intel, nke kachasị akụkụ, kwadoro ya na Intel Atom processor, ọ na-enwekwa otu àgwà ọma - obere ike oriri. Nke a na - enyewanye mmụba na nnwere onwe - ọbụna batrị na - adịghị ike ga - adịte aka. Nanị ihe ndọghachi azụ na nke a bụ ihe dị ịrịba ama karị - obere arụpụtaghị ihe na enweghi ohere iji rụọ ọrụ ọ bụghị nanị na mmemme ndị na-achọ, kamakwa "onye na-ajụ". Onye na-ege ntị ma ọ bụ ọkpụkpọ vidiyo, onye ozi ozugbo, onye nchịkọta ederede dị mfe, ihe nchọgharị na saịtị abụọ nwere ike ịchọta, ma ọ ga-akwụsị ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ya ma ọ bụ naanị mepee ọtụtụ taabụ na ihe nchọgharị weebụ gị ma nụ egwu .
N'etiti laptọọpụ ahụ, kwa, enwere ngwaọrụ ndị na-adịghị ike, ma naanị na ọnụahịa kachasị ọnụ. Ọ bụrụ na anyị na-ekwurịta banyere ịgba - ngwọta nke oge a dịka ihe dị ka kọmputa. Ha nwere ike ịbịnye mobile protes Intel i3, i5, i7 na ọbụna i9, ha na AMD ha, ọ pụkwara ịbụ ndị nnọchianya nke ọgbọ ọhụrụ. Azụ ígwè dị otú ahụ, nke mmejiri ngwongwo ndị dị na ya a depụtara n'okpuru, ga-anagide ọrụ nke mgbagwoju anya - ọ bụrụ na ndịna-emeputa, nwụnye, ma ọ bụ egwuregwu na-achọsi ike.
Ọnọdụ dị na netbooks na RAM fọrọ nke nta ka ọ dị ka CPU - ịkwesịrị ịgụta oke arụmọrụ. Ya mere, ebe nchekwa ha nwere ike itinye 2 ma ọ bụ 4 GB, bụ nke ga-agbaso ihe kachasị mkpa maka sistemụ arụmọrụ na ọtụtụ usoro "kwa ụbọchị," ma ọ bụ ezughị oke maka ọrụ niile. Ọzọkwa, iji iji nlezianya mee ihe na netwọk weebụ na ntanetị n'ịntanetị ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị, njigide a agaghị akpata nsogbu.
Ma n'ime laptọọpụ nke oge a, 4 GB bụ nke kachasị dị ala ma ọ bụ ihe dị mkpa "isi" - na ọtụtụ ụdị oge nke RAM nwere ike ịrụnye 8, 16 na ọbụna 32 GB. Ma na oru na ntụrụndụ, olu a dị mfe ịchọta uru kwesịrị ekwesị. Tụkwasị na nke ahụ, kọmpụta dị otú ahụ, ọ bụghị ihe niile, mana ọtụtụ, na-akwado ike iji dochie ma gbasaa ncheta, na netbooks enweghị ụdị njirimara dị otú ahụ.
Kaadị bụ netneck netbook ọzọ. Ihe ngosi ndị dị na ngwaọrụ ndị a abụghị, ha enweghị ike ịbụ n'ihi oke dị oke. Igwe vidiyo nke jikọtara na nhazi ahụ nwere ike ịnagide redio na HD playback video, ma na netwọk ma na mpaghara, mana ịkwesịrị ịtụkwasịkwu ihe. Na kọmpụta, Otú ọ dị, a pụrụ itinye ihe ntanetịaka ntanetị arụmọrụ, ọ ga-adịtụ ala dị ala karịa nke ya na desktọọpụ, ma ọ bụ ọbụna "zuru ezu", hà nhata. N'ezie, mgbanwe dị na arụmọrụ bụ otu ebe a dịka na kọmputa (ma ọ bụghị n'enweghị obi abụọ), na naanị na mmefu ego, onye ọrụ ahụ bụ ọrụ maka nhazi ndịna-emeputa.
Ọtụtụ mgbe, ma ọ bụghị mgbe niile, akwụkwọ ntanetị dị ala karịa laptọọpụ n'ihe gbasara ego nchekwa dị n'ime. Ma na ihe ndị dị n'oge a, nye ọtụtụ ihe ngwọta ígwé ojii, a pụghị ịkpọ ihe ngosi a dị oke egwu. Dịkarịa ala, ma ọ bụrụ na i cheghị akaụntụ eMMC na Flash-draịva nwere ikike nke 32 ma ọ bụ 64 GB, nke a pụrụ itinye na ụfọdụ ụdị netbooks na enweghị ike dochie anya - ebe a ma jụ ịhọrọ, ma ọ bụ ịnakwere dịka eziokwu na ịnakwere. N'ọnọdụ ndị ọzọ ọ bụla, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ dị mfe iji dochie HDD ma ọ bụ SSD na mbụ, ma nwee nnukwu olu.
N'iburu n'uche ebumnuche nke netbook bu n'uche, nnukwu nchekwa dị na ya abụghị ụzọ kachasị mkpa iji mee ihe dị mma. Ọzọkwa, ọ bụrụ na diski diski nwere replaceable, kama ịbụ nke ka ibu, ọ ka mma ịwụnye diski "dị ntakịrị," ma ọ bụ sie ike (SSD) - nke a ga-enye mmụba ọhụụ na arụmọrụ.
Mmechi: dịka nkọwapụta na ngwanrọ laptọọpụ zuru ezu n'akụkụ niile gbasara akwụkwọ nchịkọta kachasị mma, ya mere, nhọrọ ahụ doro anya ebe a.
Ebe ọ bụ na netbook nwere akụkụ dị nnọọ mma, dabere na keyboard dị na ya na-enweghị ike ime. Na nke a, ndị na-emepụta ihe aghaghị ịchụ ọtụtụ àjà, nke ụfọdụ ndị ọrụ na-adịghị anakwere. Na keyboard ọ bụghị naanị budata na-ebelata nha, ma ọ na-efunahụ n'etiti bọtịnụ, nke na-adịkwa ntakịrị, ụfọdụ n'ime ha anaghị ebukwa ibu, kama na-agakwa n'ebe ndị ọzọ, ebe ndị ọzọ nwere ike wepụ kpamkpam ịzọpụta ohere ma dochie ya hotkeys (ma ọ bụghị mgbe nile), na ngọngọ dijitalụ (NumPad) na ngwaọrụ dị otú ahụ kpam kpam.
Ọtụtụ kọmputa laptọọpụ, ọbụna nke kachasị kọmpat, enweghi mwepu dị otú a - ha nwere oke ihe nkiri agwaetiti zuru oke, na otú ọ dị mma (ma ọ bụ) ọ bụ maka ederede na iji ihe eji eme ihe kwa ụbọchị, n'ezie, site na ọnụahịa na nke nke a ma ọ bụ ihe nlereanya ahụ. Nkwubi okwu ebe a dị mfe - ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ nke ukwuu na akwụkwọ, itinye akwụkwọ ederede, netbook bụ ngwọta kachasị mma. N'ezie, ị nwere ike iji ya dee ngwa ngwa na obere keyboard, mana ọ bara uru?
Usoro njikwa na ngwanrọ
N'ihi arụmọrụ dị mma nke netbooks, a na-ejikarị ha arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Linux, ma Windows niile amaghị ya. Ihe bụ na os nke ezinụlọ a ọ bụghị nanị na-ewepụta obere ohere diski, mana n'ozuzu anaghị achọ nnukwu ihe onwunwe - ha kachasị mma ịrụ ọrụ na ngwanrọ na-adịghị ike. Nsogbu bụ na onye ọrụ Linux nkịtị ga-amụta site na ncha - usoro a na-arụ ọrụ kpamkpam, dị iche na ụkpụrụ "Windows", na nhọrọ nke ngwanrọ maka ya dị oke, ọ bụghị ịkọwapụta atụmatụ nke ntinye ya.
N'iburu eziokwu ahụ anya na mmekọrịta niile na kọmputa, ma obere ma ọ bụ na-anọ ọdụ, na-eme na gburugburu usoro sistemụ, tupu ị na-ahọrọ netbook, ị ga-ekpebi ma ị dị njikere ịmụta usoro mmemme ọhụrụ ahụ. Otú ọ dị, n'ihi ọrụ ndị ahụ anyị kwuru ugboro ugboro n'elu, usoro sistemụ ọ bụla ga-eme, ihe omume. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịgbanye na netbook na Windows, ma ọ bụ naanị ọdịdị ochie na mbipụta ya. Ịnwekwara ike ịwụnye ọhụrụ, usoro iri nke sistemụ arụmọrụ Microsoft na laptọọpụ, ọbụna na mmefu ego otu.
Anyị gwụchara ihe anyị nwere taa nke nwere arụmụka kachasị mma maka ịhọrọ netbook karịa kaadị ọnụ ya - na ọnụahịa. Ọbụna laptọọpụ mmefu ga-eri ihe karịrị nwanne ya na-arụkọ ọrụ ọnụ, arụmọrụ nke ikpeazụ ahụ nwere ike ịdị elu karị. Ya mere, ọ bụrụ na ịkwadighi njikere ịkwụsị, ịhọrọ ụdị ịdị umeala n'obi na afọ ojuju na arụpụtaghị arụmọrụ - ị ghaghị iji netbook. Ma ọ bụghị ya, ị nwere laptọọpụ na-emeghe nke laptọọpụ, site na typewriters na ọkachamara ọkachamara ma ọ bụ ịgba chaa chaa ngwọta.
N'ịkọwa ihe niile dị n'elu, anyị na-ahụ ihe ndị na-esonụ - netbooks dịkwuo ọnụ karị ma dị ka mkpanaka dịka o kwere mee, ebe ha na-abaghị uru karịa laptọọpụ, ma ha dị ọnụ ọnụ. Ọ bụ kama mbadamba nkume na keyboard karịa kọmputa, ngwaọrụ ọ bụghị maka ọrụ, mana maka ntụrụndụ dị mma na nkwurịta okwu na weebụ na-enweghị ihe ọ bụla na - ejikọta ebe - a pụrụ iji netbook mee ihe na tebụl, na njem ọha na eze ma ọ bụ na ụlọ ọrụ, na mgbe ị nọ ọdụ dina n'ihe ndina.